झाँक्रीको रिहाइ माग गर्दै नेकपाको प्रदर्शन, बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास [तस्बिरहरु]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
झाँक्रीको रिहाइ माग गर्दै नेकपाको प्रदर्शन, बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास [तस्बिरहरु]
माघ २९, २०७७ तस्बिर : अंगद ढकाल, कविन अधिकारी
काठमाडौँ — नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले नयाँ बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका छन् ।
माइतीघरबाट बानेश्वर पुगेका नेकपा निकट युवा विद्यार्थीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका हुन् । निषेधित क्षेत्रमा लगाइएको काँडे तारबार भत्काउन खोजेपछी अहिले सो क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ठेलमठेल भइरहेको छ । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले बिहीबार मध्यान्ह झाँक्रीलाई उनकै निवास शंखमुलबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध गालीगलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले बिहीबार झाँक्रीलाई शंखमूलस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७७ १७:३१
'झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक र दीर्घकालीन रुपमा घातक छन्। उनलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?'
काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले रामकुमारी झाँक्रीलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । मिश्रले रसातलको राजनीति सफा नगरेसम्म घटना बदलिने तर प्रवृत्ति नबदलिने बताएका छन् ।
झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक र दीर्घकालीन रुपमा घातक हुने उल्लेख गर्दै उनलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भनेरसमेत मिश्रले प्रश्‍न गरेका छन् ।
मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'जब देशको नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिको समग्र स्तरलाई रसातलमा पुर्‍याउँछन्, न तिनको शब्दमा शिष्टता हुन्छ, न कर्ममा कानुन हुन्छ। रसातलको राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म घटना बदलिन्छ, प्रवृत्ति बदलिँदैन। झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक र दीर्घकालीन रुपमा घातक छन्। उनलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?'
झाँक्रीलाई विना शर्त रिहा गर!
जब नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिको स्तरलाई रसातलमा पुर्याउँछन्,न तिनको शब्दमा शिष्टता हुन्छ,न कर्ममा कानून हुन्छ।यो राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म घटना बदलिन्छ,प्रवृत्ति बदलिँदैन।झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक छन्।उनलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन?
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) February 11, 2021
प्रहरीले पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध गालीगलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले बिहीबार उनलाई शंखमूलस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले झाँक्रीलाई थमाएको पुर्जीमा राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ५८ अनुसार पक्राउ गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त दफामा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ । कसुर प्रमाणित भए कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद, ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७७ १७:१८